War ka cusub baaritaanka dilka Jamaal Khaashuqji ee ka socday Turkiga - Caasimada Online
Home Dunida War ka cusub baaritaanka dilka Jamaal Khaashuqji ee ka socday Turkiga
War ka cusub baaritaanka dilka Jamaal Khaashuqji ee ka socday Turkiga
Istanbul (Caasimada Online) – Ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo kaashanaya Booliska Turkiga ayaa baaritaano lagu baadi goobayo dad lala xiriirinaayo ku lug lahaasha dilkii Wariye Jamaal Kashoggi ka bilaabay labbo guri oo ku yaala Gobolka Yalova oo dhaca Waqooyi Galbeed dalkaasi Turkiga.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada wada baaritaanka oo habeenkii xalay ahaa gaaray goobtaasi in ay bartilmaameedsadeyn labbada guri oo kaliya iyagoo isku gadaamay una diiday dadkii ku jiray in ay ka baxaan ilaa amar dambe.
Mid kamid ah guryahaasi ayaa waxa iska leh ganacsade caan ah oo Sacuudiga u dhashay.
Baaritaankaani ayaa la sheegayaa in loo adeegsaday Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo Eeyaha wax baara ee sida gaarka ah u tababaran si xaalada si fiican ay ula socdaan.
Ilaa iyo haatan laamaha amaanka Turkiga kama aysan warbixian howlgalkaasi waxaase la filaayaa in goor dambe oo maanta ah ay ka warbixin doonaan sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadlay Booliska dalkaasi.
Wariye Kashoggi oo wargeyska Washington Post ee dalka Mareykanka ka tirsanaa ayaa ka hor intaan la dilin galay qunsuliyada Sacuudiga ay ku leeyihiin dalka Turkiga bishii Oktoobar labbadeeda halkaasi oo lagu dilay.